China calcined mica powder fekitari uye bhizimisi | Huajing
Yedu calcined mica dzakateerana zvigadzirwa dzinotora iyo yepamusoro-tembiricha kupera mvura mumuviri kuita iyo mica kurasikirwa mvura, kuchengetedza iyo yemukati property.The yekugadzira maitiro akanaka kune zvakatipoteredza uye hapana yechipiri kusvibiswa. Iyo mica inopisa pamwe chete uye ine yakagadzika mhando. Ndiyo sarudzo yakanakisa yezvinhu zvakasarudzika zvekushongedza zvinhu, zvekuvakisa zvakajairika uye mainsulators emagetsi.
Calcined Mica (Welding Chinyorwa)
Yakavezwa Mica - Welding Chinyorwa）
F-150 Goridhe tsvuku —— 50 ～ 100 ＞ 97 —— ＜ 0.1 ＜ 0.1 7.6 0.22
F-200 Goridhe tsvuku —— 40 ～ 75 ＞ 97 —— ＜ 0.1 ＜ 0.1 7.6 0.22
F-300 Goridhe tsvuku —— 30 ～ 55 ＞ 97 —— ＜ 0.1 ＜ 0.1 7.6 0.19
Yakavharwa Mica Powder
Musiyano mukuru pakati pecalcined mica uye yakajairika mica:
1. Chinhu chikuru chinhu chemvura. Hunyoro hweccalcined mica iri pasi pe0.01%, uye iyo yakajairika mica iri pasi pe0.5%.
Yechipiri iri kupisa kurasikirwa. Iko kurasikirwa kwekutsva kwecalcined mica kuri pasi pe0.1%; kurasikirwa kwekutsva kwema mica zvakajairika kuri pasi pe1.5%.
2. Ruvara rweMuscovite wakajairika unowanzo chena kana sirivheri-chena, asi mushure mekuverenga, inogona kuve yakatsvuka, mhangura, kana kujeka.
3. Neruvara rwayo runopenya rwegoridhe, calcined mica inofarirwa muminda yekushongedza, machira emadziro uye pendi yehunyanzvi, pamwe nekutungamira nzira mukumusoro-kumagumo kweyekutenderera nekuda kwezvakakosha zvigadzirwa.
Pashure: Natural Muscovite mica upfu
Zvadaro: Zvisikwa mica upfu
Yakakosha Calcined Mica Yepamberi Welding
Yakakosha Calcined Mica Yemagetsi
Yakakosha Calcined Mica Yekuchidzira